पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ पूर्वएमाले पथमा ! « Bagmati Online
पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ पूर्वएमाले पथमा !
विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती उषाकला राईले एकैसाथ प्रचण्ड–माधव समूह परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । शनिबार दुबैले प्रचण्ड–माधव समूह परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् । तामाङ दम्पतीले ओली समूहमा प्रवेश गर्दै पूर्वएमाले विचारधार बोकेका सबै नेता तथा कार्यकर्ता यो समूहमा सामेल हुन सक्ने धारणा राखेका छन् ।